Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: I-Bitcoin Falls Ngaphantsi kwe- $ 7000 emva kokulahlekelwa yi-5% ngobusuku, Ngaba iya kuba nzima?
NgoLwesibini, Aprili 21, 2020
T • I-Bitcoin iwela ngaphantsi kwe-7000 yeedola ngokulandela i-5% yehla kwiiyure ezidlulileyo. I-cryptocurrency enkulu kunazo zonke ukunikela ubungqina kwi-bearish encinci kwintengiso yeentsuku zangaphakathi. […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: Ukulwa kweBitcoin phantsi koXhathiso oluBalulekileyo emva kokufumana kwakhona i-7000 yeeDola, ukuQhawula okanye ukuLahla?
NgoMvulo, Aprili 20, 2020
• I-Bitcoin ijongene nokuchasana okunzima malunga ne- $ 7200- $ 7300 indawo yexabiso • Ixabiso liyaqhubeka ukubamba ngaphezulu kwe- $ 7000 yenkxaso njengoko ukuqhubeka kokuqhubekeka kuhlala kungagungqi kwiveki ephelileyo, iBitcoin yalungisa yaya kuthi ga kwi-6500 yeedola kodwa yakwazi ukubuyela umva ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 7000. Ukuqala iveki engaphezulu kweli nqanaba kunokuba ngumqondiso othakazelisayo we-Bitcoin. Kodwa […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: I-Bitcoin ibuyisa ngaphezulu kwe- $ 7000 emva koLungiso lweentsuku ezili-10
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 17, 2020
• Emva kokophula ngaphezulu kwe- $ 7000, i-Bitcoin yahlala ingenazigqibo ngenxa yevolumu yokuthenga ephantsi. I-Bitcoin ijonge ukunyuka kodwa ukwehla okungaphantsi kwe- $ 6900 kungazisa abathengisi kwakhona kwimarike izolo, i-Bitcoin igqibe kwelokuba izokulandela phi impompo ekhawulezayo ukusuka kwi-6500 yeedola (ngoku ibamba njengenkxaso yeveki) ukuya kwi- $ 7200, ethi icinezele […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: I-Bitcoin Slips iya kwi-6500 yeeDola emva kokulahlekelwa yi-5% kwiiyure ezingama-24
NgoLwesine, Aprili 16, 2020
• I-Bitcoin iqhubekile nokugcina i-low low kunye ne-highs ezisezantsi kwitshaneli ehla ngeyure I-5% yehle ukufikelela kwi- $ 6500 kwangoko namhlanje. Ngoku, […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: I-Bitcoin ejongene nokuXhathisa okuqinileyo kwi-7000 yeeDola, Ngaba iya kuyaphula okanye iyenze?
NgoLwesithathu, Aprili 15, 2020
• I-Bitcoin ijongene nonikezelo olunzima kwindawo eyi- $ 6900- $ 7000, nangona ingaqala ukonyuka okutsha ukuba ixabiso lingaphumelela ngempumelelo • Iinkunzi zeBitcoin zizama ukubamba umfutho kodwa ukuthengisa uxinzelelo kuhlala kulawula. Ukusukela oko kuthengiswa kakhulu ngeempelaveki, ukungazinzi kweBitcoin bekumodareyitha emva kokuchacha kwi- $ 6600 […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: I-Bitcoin ifumana kwakhona i-3% ngobusuku kodwa ukulungiswa kwe-Bearish kuyaqhubeka
NgoLwesibini, Aprili 14, 2020
• Emva kokuqhekeka komtshato, iBitcoin isamisa ulungiso olukhulu kwitshathi yeeyure ezi-4. I-Bitcoin sele iyila iphethini esezantsi nesezantsi kumjelo weyure. U-Bitcoin uqhubeke nokulwa phantsi kwe-7000 yeedola ukusukela ixabiso latsala kwi-7450 yeedola kwiveki ephelileyo. Emva kokulahla kwi-6600 yeedola izolo, i-Bitcoin ibuyile kancinci nge-3% […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: Iimpawu zeBitcoin eziGuqukayo eziLandela ukuPhuma kweH & S
NgoMvulo, Aprili 13, 2020
Kwitshathi yeyure, i-Bitcoin idibanisa malunga ne-6700 yeedola kulandela ukubuyisa okubukhali kwinqanaba le-6600 yeedola • Emva kokuyeka umda wenyanga, iBitcoin iqinisekisa ukubuyela umva ngentloko yentloko kunye namagxa kwitshathi yeeyure ezi-4. Ukuqala iveki nge 3% yelahleko, amaxabiso eBitcoin ngoku ajikeleza malunga ne-6700 yeedola ngokuchasene neDola yaseMelika elandela […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: I-Bitcoin ibuyisa umva iphantsi kwe- $ 7000 Ukulandela i-5.2% yokulahleka ngokuhlwa
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 10, 2020
Ixabiso lisondela kwinkxaso- $ 6700 yenkxaso, kodwa iBitcoin inokubuyisa umva ukuba inqanaba liphethe Ngeli xesha, ibilithontsi elinzima phantsi kwenqanaba lama- $ 7450. Emva kwe […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: Ipateni yeBlackish yeFlegi iphakamisa iRally eNtsha yeBitcoin, isiFikelela kwi $ 7600?
NgoLwesine, Aprili 9, 2020
• I-Bitcoin ithathelwe ingqalelo i-rally entsha kodwa ixabiso lihlala libambekile ngunxantathu olinganayo weyure • Ukuba ipateni yeflegi ekhulayo iyasilela, iBitcoin inokubuyela kwi-7100 yeedola Emva kokuncipha okukhawulezayo ukusuka kwi-7072 yeedola, iBitcoin iqhubeka ikufumana kunzima ukutyhala ixabiso elingaphezulu kwe ngoku ngeveki ephezulu ye- $ 7450. Ngaphandle kwalonto, […]
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: Iifom zeBitcoin eziPhezulu eziPhezulu ezijikeleze i- $ 7400, ukuBuyela umva ngeVeki?
NgoLwesithathu, Aprili 8, 2020
• I-Bitcoin ikhangela inqanaba lokubuya emva kokuseka ukunganyangeki okujikeleze i-7450 yeedola • I-Bitcoin inokuguqula inzuzo ukuba ixabiso lihle ngaphantsi kwe-7000 yeedola, kodwa linenkxaso eyomeleleyo kwi-6700 yeedola Emva kokubuyisa i-7000 yeedola ngoMvulo, i-Bitcoin ibone enye i-5% inzuzo yokufikelela kwinqanaba le-7450 yeedola . I-Bitcoin okwangoku ithengisa malunga ne-7300 yeedola ngokuchasene […]